China Umgangatho ophezulu we-16A / 32A kwibhokisi yeshaja yeZithuthi zoMbane Ukutshaja ngohlobo lwe-2 Outlet Standard ekwenziweyo kunye neFektri | Itekhnoloji edibeneyo
I-CE / 11KW
Umgangatho ophezulu we-16A / 32A kwibhokisi yeshaja yeZithuthi zoMbane Ukutshaja ngohlobo lwe-2 Outlet Standard
Ibhokisi ephezulu yetshaja yase China, ukutshaja imoto, siza kuqala isigaba sesibini sesicwangciso-qhinga sophuhliso. Inkampani yethu ibheka "amaxabiso afanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa" njengomgaqo wethu. Ukuba unomdla kuso nasiphi na isisombululo okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, qiniseka ukuba ukhululekile ukunxibelelana nathi. Kudala sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kwixesha elizayo.
Igalelo Voltage: 230 ± 10% (1 isigaba), 400 ± 10% (isigaba 3)
Ukwenza ixabiso elongezelelekileyo kubathengi yifilosofi yeshishini lethu; Ukukhula komthengi kukusukela kwethu ukusebenza kuMgangatho oPhezulu waseTshayina 10 / 16AIbhokisi yetshaja ephathekayo ye Ukutshaja iZithuthi zombaneNgohlobo lwe-1 Outlet Standard, siye sabekwa njengefektri ye-OEM yeentengiso ezininzi zorhwebo. Wamkelekile ukuthetha nathi kuthethathethwano kunye nentsebenziswano.
230 ± 10% (1- isigaba)
400 ± 10% (isigaba 3)
Isokisi enye yokutshaja
Intambo yokutshaja ye-5m
I-4.3, i-LCD ukubonisa yonke idatha yemoto kwisikhululo sokutshaja ngexesha lokutshaja. Ngaba uyayibona imeko yentlawulo, kubandakanya nekhoyo ngoku, ombane kunye nobushushu. Izikrufu zilungile ebhokisini ukuze ungakhathazeki malunga nokuwa kwesikrini. Intambo ye-5-7 yemitha ishiya indawo eyaneleyo phakathi kwemoto yakho kunye nesikhululo sokutshaja.
Zonke iimveliso zethu zi-CE, umgangatho uthembekile. Itshaja yethu ye-EV iyahambelana nezithuthi zombane ezininzi ezihambelana nomgangatho we-IEC 62196-2.
Q1. Ngaba le ingaphandle?
A: Ewe, le mveliso inokufakwa kwaye isetyenziswe ngaphakathi nangaphandle. Icandelo lethu linenqanaba le-NEMA 4 yokuvalelwa.
Umbuzo Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuziswa?
A: Sinokunikezela ngesampulu ukuba sinamalungu alungeleyo kwisitokhwe, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zesampulu kunye neendleko zekhuriya.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu we-32A LCD Umbane weChaja yeeMoto eziKhutshwe ngodonga lwe-Type2 Socket for Vehicles
Okulandelayo: Uhlobo lwe-Wallbox 2 16A 11kw Izigaba ezithathu ze-European Standard EV yokutshaja indawo ye-EV kwitshaja ye-Smart Charge
Ukutshaja iZithuthi zombane
Ibhokisi yetshaja ephathekayo
Chwetheza i-1 ev tshaja
iintlobo zeeshaja zezithuthi zombane
Ibhokisi yokutshaja ye-EV kwitshaja yeeMoto zombane 40 ...
7kw EV Household Ukutshaja Cable Tshaja kunye TU ...